onlineakhabar.com: OMG !! श्रीमती गुहारको लागि चिच्चाइरहिन्, आफ्नै भाइलाई गोली हानेर जिउँदै जलाईयो...(Watch VIDEO)
Amazing News, Amazing Video, Amazing World, India News, Indian Police, Main News » OMG !! श्रीमती गुहारको लागि चिच्चाइरहिन्, आफ्नै भाइलाई गोली हानेर जिउँदै जलाईयो...(Watch VIDEO)
OMG !! श्रीमती गुहारको लागि चिच्चाइरहिन्, आफ्नै भाइलाई गोली हानेर जिउँदै जलाईयो...(Watch VIDEO)
भारत पटनाको आरा जिल्लाको उत्तरदाहा गाउँमा दुई दाजु भाइहरु झगडाका कारण आफ्नै भाइलाई गोली हानी घाटमा लगेर जिउँदै जलाईएका छन् । खबर अनुसार दुई भाइहरु बिच सम्पत्तिका कारण विवाद भएको थियो । जसको कारण यो घटना घट्न पुग्यो । पुलिस घटना बारे जाँच भैरहेको छ । यो घटना बुधवारको भएको बताइएको छ ।
घछनाको विस्तृत यस्तो छ...
मृतक दयाशंकर साहको श्रीमती रीना देवीका अनुसार बुधवार दिउँसो लगभग १ बजे उनको पनिको उनकै भाइ मन्टु मोहन साहले गोलि हानि घाइते बनाएका थिए ।
उनि आफ्नो घाइते श्रीमानलाई अस्पताल लैजानको लागि परिवार सँग पटक-पटक गुहार मागीरहिन्, तर उनको त्यो गुहार कसैले सुनेनन । त्यसपछि उनले उक्त घटनाको सुचना आफ्नो माइती पक्षलाई दिएकी थिइन् ।
मृतक की पत्नीका अनुसार पतिकै घरवालाहरुले उनलाई गाउँकै नजिक छेर नदीमा लगेर उनको पतिलाई जिउँदै जलाउन थाले । यसै क्रममा आफ्नो माइतिबाट केही व्यक्तिहरु आएका थिए र उक्त घटना घट्न नदिन धेरै कोशिस गरेका थिए उल्लो उनिहरुले पिटाइ खानु परेको थियो ।
पुलिस भन्छ मृत्यु अन-स्पोट भएको थियो
जगदीशपुरको एसडीपीओ द्वारिका पाल का अनुसार, अपराधीहरुले शवलाई जलाएर सबुत मेटाउन खोजेको देखिएको छ । दयाशंकरको मृत्यु गोली लागेका कारण अन-स्पट भएको थियो । उनलाई जिउँदै नजलाईएको किनभने मृतकको छातिमा गोली लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा बच्ने संभावना एक प्रतिशत पनि नहुने बताउँछ ।
Tags : Amazing News Amazing Video Amazing World India News Indian Police Main News